Dị iche iche nke Mgbakwunye Mgbakwunye | Okporo ụzọ ka Mgbakwunye
Beverly na-atụ aro
Bido azụmahịa nke ụgbọ mmiri gị na ntanetị
by Beverly Obere on Nwere ike 22, 2021
Rosetta Stone Mụta Asụsụ Na-akparaghị ókè | Ọnwa iri na abụọ - Mụta Asụsụ 12 | PC / Mac / iOS / gam akporo Download
09/23/2021 07:00 elekere GMT
Abamuru nke Mgbakwunye ahia bu ihe amara taa karie na mbu. Nke a bụ otu ihe dị mkpa maka ịrịọ nnukwu arịrịọ nke Mgbakwunye mmemme ahia n'etiti ọtụtụ ndị na-ere ahịa weebụ n'ịntanetị.
Ihe ohuru ohuru ohuru emeela ka ndi ahia ahia na ndi ozo gha enweta onu ogugu ha na ego ha nwetara. O kwere omume ugbu a iji azụmahịa dị ka PayPal maka ịkwụ ụgwọ na nhazi akwụkwọ ọnụahịa. Nke a emeela ka ndị na-ere ahịa n'ahịa n'ịntanetị kwụọ ụgwọ ịkwụ ụgwọ ya site na ndị ahịa.
Ma ndị mmekọ ma ndị ahịa ghọtara n'ezie na ahịa mmekọ mmekọ na-arụ ọrụ maka ha abụọ. Ndị ahịa ahụ na-elere mgbakwunye mmekọ dị ka ohere iji kwalite ihe ha na-akwụ nnukwu ụgwọ. N'aka nke ọzọ, ndị mmekọ ahụ na-ahụ maka azụmaahịa njikọ dị ka ụzọ kwụ ọtọ iji nweta ego na ntanetị site na ịme ihe masịrị ha nke kachasị, nke bụ mbipụta weebụ.
Naanị dịka ịrịọ arịrịọ nke mmekọ mmekọ abanyela na overdrive, n'otu aka ahụ echiche nke ndị mmadụ agbanweela maka ọfụma maka azụmaahịa mgbakwunye. Mgbakwunye ahia abughi ihe echebara echiche dika uzo nke abuo nke ndi ahia, ma obu dika uzo ndi ozo site n'aka ndi ahia na ntaneti. Maka ndị mmekọ na ndị ahịa, ugbu a a na-eche maka mgbakwunye mgbakwunye dị ka isi mmalite ego na uru.
Ugbu a anyị chọrọ inyocha ụdị ụdị mgbakwunye ga-arụ ọrụ kachasị mma maka mmadụ ọ bụla? Enwere ọdịiche dị na mmemme Mgbakwunye Mgbakwunye?
Enwere uzo di iche iche nke ahia ndi ozo, na udiri a gha adabere na otu igha agha ha. Categorydị isi nke mmemme ịzụ ahịa na-adabere n'okpuru nhazi 2: ịkwụ ụgwọ-kwa-pịa (PPC), na ịkwụ ụgwọ-kwa-arụmọrụ (PPP).
Na-akwụ ụgwọ ọ bụla ịpị (PPC) - PPC bụ ụdị ahịa mmekọ kachasị ewu ewu maka ndị mmekọ nwere obere saịtị, yana yikarịrị ka usoro kachasị adaba ka ha nweta ego. Na ụdị azụmaahịa a, onye ahịa na-akwụ ụgwọ mgbakwunye ya oge ọ bụla onye ọbịa bịara na weebụsaịtị ya, nke ahụ bụ mgbe ọ bụla mmadụ pịa site na ọkọlọtọ azụmaahịa ma ọ bụ mgbasa ozi ederede.
Perkwụ Pergwọ Ọrụ (PPP) - A na-enwe mmasị na ndị mmekọ PPP nke ọma n'etiti ndị ahịa na ọ bụkwa ụdị nke na-enye afọ ojuju maka ndị mmekọ. N'ime ụdị mmemme a, onye ahịa ahụ na-akwụ ndị mmekọ ahụ ụgwọ naanị mgbe nkwanye ya gbanwere ka ọ rụọ ọrụ - ọ bụ mgbe ọ bụla onye ọbịa ahụ o zoro aka zụtara ihe n'ezie na weebụsaịtị ndị ahịa ma ọ bụ mgbe onye ọbịa bịara bụrụ onye ndu. N'aka nke ọzọ, ụdị azụmaahịa a ga - abụrịrị afọ ojuju maka akụ na ụba maka ndị mmekọ a raara onwe ha nye, maka ọrụ na PPP mmekọ mmekọ na - adịkarị na 15% gaa 20% nke ire ere ahịa.
GỤRỤ AHỤ Olee otú ịhọrọ Mgbakwunye ọkọlọtọ N'ihi na gị na saịtị
A na-ahazi ịkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ ụgwọ ọrụ kwa otu n'ime ụdị 2: ịkwụ ụgwọ ụgwọ (PPS) na ịkwụ ụgwọ (PPL). Abụọ ndị a bụ ndị a ma ama.
a) Na-akwụ Pergwọ Ahịa (PPS) - Na ụdị ụgwọ a na-akwụ ụgwọ ọ bụla, ndị na-ere ahịa na-akwụ ndị mmekọ ahụ ụgwọ ụfọdụ mgbe ọ bụla onye ọbịa ahụ kọwaara weebụsaịtị nke ndị ahịa n'ezie ịzụta ihe site na weebụsaịtị ndị ahịa. A na-akwụ ndị mmekọ ụgwọ ugboro ugboro na kọmitii, ọ bụ ezie na ndị ahịa ndị ọzọ ga-ekpebi ịkwụ ụgwọ akwụrụ. N'agbanyeghị ihe ndabere nke ụgwọ bụ, ọ bụ Elezie ukwuu karịa ndị na-eri ugwo mmekọ na a na-akwụ-kwa-pịa Mgbakwunye mmemme.
N'ime ụdị Mgbakwunye ahịa, a na-akwụ ụgwọ mgbakwunye mgbe ọ bụla onye ọbịa ọ zoro aka na weebụsaịtị nke onye ahịa ahụ jupụtara n'ụdị ngwa ma ọ bụ ụdị ọ bụla yiri ya na ụlọ ọrụ azụmahịa. Wezuga ụdị ụdị mmekọ 3 a, ọtụtụ ụdị azụmaahịa mgbakwunye ndị ọzọ dị. Ọ bụrụ na otu a dabere na omimi nke netwọkụ mmekọ, enwere ike ịkọwa ya dị ka otu ọkwa, ọkwa abụọ, na ahịa mmekọ ọtụtụ.
Otu Ugo, Uzo abua, na Mgbakwunye ndi ozo
Kindsdị ahia ndị a dabere na ọkwa ma ọ bụ ọkwa dị iche iche na netwọkụ mgbakwunye site na ịkwụ ụgwọ.
A) Single Tier - N'ime usoro mmekorita nke otu otu, a na-akwụ ndị mmekọ ahụ ụgwọ naanị dabere na ahịa ma ọ bụ okporo ụzọ ọ kọwapụtara onye ahịa ahụ. All atụlebu Mgbakwunye ụdị ahịa (ntụgharị PPS, PPL, na PPC) dabara n'okpuru otu ọkwa.
B) Uzo abuo - Na mmemme mmekorita nke okpukpu abuo, ndi ozo ejighi emefu ego maka uzo ahia ma obu ahia nke o na enye weebụsaịtị nke onye ahia, ma otua na ahia obula ma obu ahia ndi ozo ndi debanyere aha ha dika sub- Mgbakwunye nke njikọ a na-akwụ ụgwọ n'elu.
C) Otutu Tier - Otutu otutu uzo nke mmekorita na aru oru otu uzo, obu ezie na ndi ozo nwere ike inweta oru ndi ozo di iche-iche nke ndi ozo di iche-iche di iche iche.
D) Nkesa Mgbakwunye Inweta Ego Mgbakwunye - Na ụdị a, na-abụghị mgbakwunye ịme mgbakwunye ego maka otu onye na-azụ ahịa ọ kọwapụtara n'ezie webụsaịtị azụmaahịa ahụ, a na-akwụ ụgwọ mgbakwunye ahụ oge ọ bụla onye ahịa ọ zoro aka laghachi na weebụsaịtị azụmaahịa ma zụta ihe ọzọ. Forlọ ọrụ maka ụdị azụmaahịa a dabere na akụkụ ahịa ma ọ bụ dabere na ụgwọ a rụziri.
Onye ọ bụla na-ere ahịa n'ahịa n'ịntanetị na-achọpụta na ụdị ọrụ mgbakwunye mgbakwunye a na-arụ ọrụ n'ụzọ dị iche maka onye ọ bụla n'ime ha. Multi tier Mgbakwunye ahịa, nke a na-akpọ Multi-Level Marketing (MLM) bụ ụdị azụmahịa siri ike nke na ọ naghị arụ ọrụ maka mmadụ niile. Dịka eziokwu, ọtụtụ ezigbo ndị na-ere ahịa n'ịntanetị na-eche banyere MLM dị ka amachibidoro ma ọ bụ ihe na-adịghị mma.
Onye na-ere ahịa na ntanetị kwesịrị ịnwale usoro dị iche iche wee họrọ nke ga-arụ ọrụ kacha mma maka ya. Ya onwe ya gha etinye uche na uzo ahia ndi ahu kwesiri ya maka oru ahia ya.
Naanị dịka ịrịọ arịrịọ nke mmekọ mmekọ abanyela na overdrive, n'otu aka ahụ echiche nke ndị mmadụ agbanweela n'ezie maka ọfụma maka mgbakwunye mmekọ. Mgbakwunye ahia abughi ihe echebara echiche dika uzo nke abuo nke ndi ahia, ma obu dika uzo ndi ozo site n'aka ndi ahia na ntaneti. Maka ndị mmekọ na ndị ahịa, ugbu a a na-eche maka mgbakwunye mgbakwunye dị ka isi mmalite ego na nnata.
N'aka nke ọzọ, ụdị azụmaahịa a ga - abụ afọ ojuju na akụnụba maka ndị mmekọ a raara onwe ha nye, n'ihi na ụlọ ọrụ PPP na - agbakwunye ahịa na - abịa na 15% gaa 20% nke ire ere. Wezuga ụdị ụdị mmekọ 3 a, ọtụtụ ụdị azụmaahịa mgbakwunye ndị ọzọ dị.
Sony A80J 65 Inch TV: BRAVIA XR OLED 4K Ultra HD Smart Google TV na Dolby Vision HDR na Alexa Ndakọrịta XR65A80J- 2021 Model
09/23/2021 10:53 elekere GMT
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Mgbakwunye Mmemme Mmemme